Mmekọrịta Ndi ana-akpo si Outlook ka Nexus 5 Mfe s
> Resource> Android> mmekọrịta Ndi ana-akpo si Outlook ka Nexus 5 Mfe
Ana m achọ a ụzọ ka mmekọrịta m kọntaktị site na Outlook m Nexus 5, ma adịghị m chọpụtara na otu "akpaka" usoro, naanị akwụkwọ ntuziaka nyefe si Outlook ka CSV faịlụ ka gmail. Mgbe ahụ mmekọrịta m gmail kọntaktị na ekwentị. Otú ọ dị, ọ bụ ntuziaka na na ebe n'ụzọ Google ejisie ka jikota m kọntaktị 'aha na ha utu aha, nke mere na nanị utu aha (bụghị aha)-egosi na m kọntaktsị na gmail (na Ya mere na ekwentị).
Olee otú mmekọrịta Microsoft Outlook na Google Nexus 5
Ka mmekọrịta kọntaktị site na Outlook ka Nexus 5, ị nwekwara ike na-apụtachaghị ìhè dị ka onye ọrụ n'elu na-eme. Otú ọ dị, ị na-adịghị ga-eme nke ahụ. Kama, ị nwere ike inwe ya mere effortlessly mgbe i nwere ọkachamara Android njikwa, dị ka Wondershare MobileGo for Android (Windows).
Ọ na-akpan mere maka enyere gị aka jikwaa ihe niile na gị Nexus 5. Ọ nwere ikike iji chọpụta ma nyefee kọntaktị niile na gị Outlook Express na Outlook 2003/2007/2010/2013 gị Nexus 5 na-enweghị a ikedo. Ọzọkwa, n'agbanyeghị ma na ị nwere eriri USB ma ọ bụ, ọ pụrụ inyere gị emezu nke ahụ. Amagbu? Ntak download free ikpe version nke Android Manager? Ọ na-ahapụ ị na-eji Android njikwa kpamkpam maka 15 ụbọchị.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị Nexus 5 ka PC site WiFi / eriri USB
Dị ka m kwuru n'elu, ị nwere ike ma ikwunye na a UBS USB jikọọ gị Nexus 5 ka PC ma ọ bụ jiri WiFi njikọ. Iji jiri WiFi, otu ihe ị na-ekwesịghị ileghara anya bụ na ị chọrọ wụnye MobileGo ngwa nke a na-akpaghị aka arụnyere na Nexus 5 site na eriri USB. Mgbe njikọ dị ịga nke ọma, gị Nexus 5 ya faịlụ ga-egosipụta ke akpan window.
Nzọụkwụ 2. mmekọrịta Google Nexus 5 na Outlook
-Aga n'aka ekpe-n'akụkụ kọlụm, na pịa Ndi ana-akpo. Na kọntaktị window, pịa Import / Export na ọ na-akụda ndepụta, họrọ Import kọntaktị site na kọmputa. Ọzọ dobe ala ndepụta abịa si, site na nke ị nwere ike pịa si Outlook Express ma ọ bụ site na Outlook 2003/2007/2010/2013.
Mgbe ahụ, Android njikwa ga-amalite ịchọpụta na-agụ kọntaktsị na gị Outlook akaụntụ. Na, na, ị nwere ike họrọ otu kọntaktị Atiya ịzọpụta Outlook kọntaktị, kaadị ebe nchekwa ekwentị ma ọ bụ na kaadị SIM. Mgbe ahụ, pịa Import nyefee kọntaktị site na Outlook ka Nexus 5.
Ugbu a, Outlook kọntaktị e synced na gị Nexus 5. Ọ bụrụ na ị na-ahụ ọtụtụ oyiri na ya, ị nwere ike pịa De-oyiri ka jikota ha. Ọ bụrụ na ị chọrọ dezie a na kọntaktị, ị dị nnọọ mkpa nne Mmetụta kọntaktị na pịa Dezie dezie na Ama kọntaktị.
E wezụga Outlook mmekọrịta na Nexus 5, na Android njikwa na-ahapụ gị:
Nyefee faịlụ site na PC na-Nexus 5: Nke a Android njikwa na-ahapụ gị nyefee ma ọ bụ tọghata vCard faịlụ, photos, music, videos na ngwa gị Nexus 5.
Na nkwado ma weghachite Nexus 5: Chọrọ ndabere data on Nexus 5 tupu data ọnwụ na mberede? Ọ bụ ihe dị mfe. The Android njikwa-enye gị otu-click nkwado ndabere na mpaghara mgbake.
Import iTunes listi ọkpụkpọ iji Nexus 5: na ya, ị nwere ike mfe mbubata niile ma ọ bụ họrọ listi ọkpụkpọ na iTunes Library ka Nexus 5.
Bugharịa faịlụ site na Nexus 4 ka Nexus 5: Ọ dịghị ihe siri ike. Jikọọ gị Nexus 4 na Nexus 5 na kọmputa na-agba ọsọ na Android faili. Mgbe ahụ, akpali music, videos, kọntaktị, na ndị ọzọ faịlụ site na Nexus 4 ka Nexus 5.
Top 5 Android ndabere Software